Akụkọ - Ohere na ihe ịma aka na-ebikọ ọnụ, yana nkwakọ ngwaahịa smart ahụike ghọrọ usoro izugbe maka ọdịnihu
Nkwakọ ngwaahịa ahụike
Sterilization Akwụkwọ Bag
Sterilization Reels, gusseted, akara akara
Sterilization Reels, ewepụghị, okpomọkụ akara
Sterilization Pouches, gusseted, okpomọkụ akara
Sterilization Pouches, ewepụghị, onwe akara
Sterilization Pouches, ewepụghị, okpomọkụ akara
Tyvek Sterilization Reels na obere akpa
Ihe ngosi Chemical
Wrapping Crepe Akwụkwọ
Wrap mpempe akwụkwọ
Bowie & Dick Ule Ngwunye
Tyvek nkụnye eji isi mee akpa
Middile ume obere akpa
Ohere na nsogbu di iche-iche na-ebikọ ọnụ, yana nkwakọ ngwaahịa ịgwọ ọrịa ghọrọ usoro izugbe nke ọdịnihu
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, na mmepe ngwa ngwa nke ụlọ ọrụ ọgwụ na-arụ n'ụlọ, ụlọ ọrụ ọgwụ na-akwụkwu ụgwọ na nkwakọ ngwaahịa, yana ọganihu na-aga n'ihu nke nkwakọ ngwaahịa na teknụzụ mbipụta, uru nkwakọ ngwaahịa ọgwụ nke mba m gosipụtara usoro nke uto afọ site na afọ. Dabere na "2019-2025 China Pharmaceutical Packaging Market Status Survey na Development Prospect Report" nke China Industry Research Network wepụtara, ụlọ ọrụ nkwakọ ngwaahịa ọgwụ ejirila 10% nke ngụkọta ngwongwo ụlọ zuru oke, ụlọ ọrụ ahụ nwere ọdịnihu dị mma.
Ahịa na-agbanwe ngwa ngwa, ohere na ihe ịma aka na-ebikọ ọnụ. N'otu aka, na mmụba nke nwayọ nwayọ nke ogo oriri ndị mmadụ yana mmụba na-aga n'ihu nke mma, nkwakọ ngwaahịa na-eweta njirimara nke mmadụ dị iche iche na arụmọrụ gburugburu ebe obibi. N'otu oge ahụ, na mmejuputa ụdị ọhụrụ nke Iwu Ọgwụ Ọgwụ, ụlọ ọrụ na-ekwenyekarị na nnabata nke nwayọ nke ịntanetị nke ọgwụ ọgwụ bụ usoro izugbe, nke pụtakwara na ọchịchọ maka nchekwa ọgwụ ọgwụ, njem na nkwakọ ngwaahịa na-abawanye na mmụba nke ntinye Internetntanetị. N'ozuzu, a na-atụ anya na ahịa ahịa nke ụlọ ọrụ nkwakọ ngwaahịa ọgwụ ga-agbasawanye n'ọdịnihu, a ga-atụkwa anya na nnyefe na usoro chọrọ ga-aga n'ihu na nkwalite. N'okpuru asọmpi ahịa na-arịwanye elu, ụlọ ọrụ nkwakọ ngwaahịa ọgwụ ụlọ kwesịrị ịchọ ụzọ ọhụrụ maka mgbanwe na ihe ịga nke ọma.
N'aka nke ọzọ, na-aga n'ihu mmepe nke nwere ọgụgụ isi technology, ọgụgụ isi upgrading na centralized mwekota ga-abụ isi mmepe na-emekarị nke nkwakọ ụlọ ọrụ na-esote afọ ole na ole. N'ọnọdụ a, n'oge mmepe nke ụlọ ọrụ ahụike ọgbara ọhụrụ, nwelite ngwaọrụ ọgwụ abụrụla isiokwu nyocha nke natara nlebara anya. Dabere na otu esi eme ka nkwakọ ngwaahịa ọgwụ dị mma ma dịkwuo mfe, mgbakwunye nke echiche nke nchekwa gburugburu ebe obibi emeela ka mmelite nke nkwakọ ngwaahịa na-aba uru karị. N'otu oge ahụ, etinyela ọgụgụ isi nke nkwakọ ngwaahịa ọgwụ na usoro ihe omume.
Nkwakọ ngwaahịa ahụike Smart aghọwo usoro mmepe ụlọ ọrụ. Ihe enwere ike ihu bu na banyere nkwakọ ngwaahịa ngwaahịa ọgwụ n'onwe ya, oke nchekwa ya na njirimara ziri ezi dị elu na-eme ka ọ bụrụ ọkwa siri ike na ngwugwu ngwaahịa ndị ọzọ enweghị ike ịmakọ. N'okpuru nduzi nke mmepe nke teknụzụ na usoro imepụta, mmadụ imepụta oge, ịdị mma, na ịdị arọ dị mfe abụrụla ngosipụta dị mkpa nke usoro ọgụgụ isi nke nkwakọ ngwaahịa.
Na mgbakwunye na nhazi nke usoro nkwakọ ngwaahịa na akụrụngwa, nkwakọ ngwaahịa ahụike nke kọmputa ejiriwo nke nta nke nta mepụta usoro mmepe ngwa ngwa, yana ntinye nke nkwakọ ngwaahịa smart gụnyere QR Koodu, akara ngosi, na akara elektrọnik ejirila nwayọ banye na nkwakọ ngwaahịa ahụ. ụlọ ọrụ. Nke a dabere na usoro nnweta ihe ọmụma kwekọrọ na nke enyere site na ngwaọrụ eletrọnị ndị a na-ejikarị.
Ka ọ dị ugbu a, mba m ka dị na mbido ya maka nyocha na imepụta nkwakọ ngwaahịa ọgwụ mara mma. Ọ dị mkpa ịrụsi ọrụ ike na ọtụtụ ihe dịka imepụta ihe ọhụrụ, nyocha akụrụngwa n'ichepụta yana mmepe, nchọta ihe onwunwe na nsonaazụ mmepe, njikwa ọnụ ahịa nkwakọ ngwaahịa, yana mmepe ahịa iji kwalite mmepe ngwugwu nkwakọ ngwaahịa nke obodo m.
Ekwentị: 0086- (0) 21-54315666
Hospitallọ Ọgwụ Mba na Ahụike Ahụike ...
"Lọ ọgwụ “International Hospital and Medical Equipment Suppli ...
Shanghai Jianzhong na-akwado ...
Shanghai Jianzhong bụ ụlọ ọrụ ọkachamara na mmepụta nke mmetụta uche ...
Ohere na nsogbu chere-iru-na-adi, na ...
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, na mmepe ngwa ngwa nke ụlọ ọrụ na-emepụta ọgwụ na ụlọ ...
Ahịa & Ahịa